Bedelka Micro, Beddelka Beddelka, Xaddid Beddelka - LEMA
Wareegtada KW7 Micro
KW7F Caddaynta Bixinta Micro
KW12 Micro Beddel
KW12 Casaan iyo Madow
KW12F Biyaha Cadeynta Wareejinta Micro
LZ5 Isbedelka Xaddidnaanta Xaddidnaanta
LZ7 Isbedelka Xaddidan ee Xaddidan
LZ8 Mini Xaddid Switch
Wareejinta Xaddidaadda LHL
LWL Xaddidaadda Guud
LT Beddelasho Beddelka
IPZ AC Power saldhigyo
Beddelka Beddelka PBS
Lema PBS-003 buluug hogaaminaya badhanka riixida oo leh m ...
Daad KW12-93 Biyaha kululeeyaha korontada Micro ...
Lema KW12-1S 3 biinanka korontada microswitch Genera ...
Lema KW7-32L fur furitaanka terminal deg deg ah tallaabo micro s ...
Lema KW7-0II laba jibbaar ficil ficil baddel magnetic ...
Marka loo eego jawiga codsiyada kala duwan, waxaan ku hagi karnaa macaamiisha sida loo rakibo oo loo isticmaalo furayaasha, ama aan u siino macaamiisha talooyin ku saabsan xulashada iyadoo loo eegayo shuruudaha farsamo.
Marka wax soo saarku xumaado inta lagu jiro isticmaalka, waxaan ka caawin doonnaa macaamiisha falanqaynta sababta dhibaatada iyada oo loo marayo taleefan, emayl, iyo shaybaarada wax soo saarka oo cilladaysan. Haddii loo baahdo, waxaan u diri karnaa shaqaale farsamo goobta wax soo saarka macaamiisha si ay uga caawiyaan falanqaynta si loo hubiyo in dhibaatada si habsami leh loo xaliyay.
Marka loo eego bay'ada arjiga macaamilka, waxaan ka caawin karnaa macaamiisha inay sameeyaan qalab tijaabo ah oo u ekeysiinaya bay'ada arjiga si ay u tijaabiyaan alaabada la soo xulay si loo hubiyo in badeecadu buuxin karto baahiyaha deegaanka arjiga, oo aan ku siinno warbixinno natiijooyinka baaritaanka tixraac ah
Bixiyaan talo farsamo waqtigeeda ku habboon si aad uga caawiso macaamiisha rakibidda saxda ah iyo isticmaalka alaabada. Inta lagu jiro horumarinta alaabooyinka cusub, waxay ka caawin kartaa macaamiisha inay si guul leh u dhammaystiraan naqshadeynta iyo horumarinta alaabooyinka cusub isla markaana ay si dhakhso leh u xalliyaan su'aalaha ku soo food saaray arjiga alaabada, si badeecaddu si xasiloon loogu dabaqo alaabada taageerta.
Zhejiang Lema Electric Co., Ltd.waxay ku taalaa Magaalada Wenzhou, ee Gobolka Zhejiang. Shirkadda waxaa la aasaasay 1986 Lema waxaa ka go'an inay R & D, wax soo saarka iyo iibinta of warshadaha gacanta ku biiro korantada. Waxyaabaha aasaasiga ah ee shirkadda waxaa ka mid ah furayaasha micro-ka iyo safarka (xaddid) Is-beddelka, badhanka badhanka riixa, beddelka cagaha, wareejinta isbeddelka, ilaaliyaha culeyska, korantada korantada AC. Ka dib markii ku dhowaad 30 sano oo horumar ah oo joogto ah, Lema waxay noqotay soo-saare xirfadle baaxad weyn leh badalashada Shiinaha. Shirkadda hadda waxay daboolaysaa aag ka badan 11,000 mitir murabac.
KONTOROOLKA ISKU beddel soosaaraha xirfadlaha ah
QAYBTA HOOSE EE SARE EE BADBAADADA IYO QODOBKA YAR
DIIRADA KU SAABSAN HORUMARKA SOO SAARKA QAYBTA SHAQAALAHA SOO SAARKA SARE EE SARE.
SHEEKO AAD U LEH XOOGAN FARSAMO EE SARE IYO DEEGAAN XUN
Furayaasha micro-ka biyuhu waxay si ballaaran u adeegsadaan jawiga qoyan. Heerka ilaalinta ayaa gaaraya IP67. Waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa qalabka guryaha, mashiinnada. Warshaddeena waxay bixisaa noocyo kaladuwan oo ah biiro-galeenno yaryar oo biyuhu xiraan oo leh cabbirro kala duwan. Siligga leedhka waa lagu habeyn karaa shuruud.
Electronica Munich waa mid ka mid ah dhacdooyinka adduunka ugu weyn ee Elektaroniga, Qeybaha, Nidaamyada iyo Codsiyada. Ku soo biir dhammaan korantada korantada hal meel. Waxaan ku soo bandhigeynaa furaha micro-ka, xaddidida ku-beddelka, bedelka cagaha iyo ku-beddelashada halkaa. Wax soo saarkayagu waxay soo jiitaan indhaha vi ...
La cusbooneysiiyay degel rasmi ah
Si aan si wanaagsan ugu adeegno macaamiisheenna, degelkeenna rasmiga ah (www.chinalema.com) waa la cusbooneysiiyay. Macluumaadka badeecaddu waa mid dhammaystiran. Shaqaalaha adeegga macaamiisha ayaa khadka tooska ah ugu jira waqtiga dhabta ah si ay u siiyaan xalka macaamiisha.
Noocyada caadiga ah ee furayaasha loo isticmaalo wax soo saarka elektarooniga ah
Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka ogaato microswitches, waxaad ku jirtaa bogga saxda ah. Qodobkaan, waxaan ku eegeynaa noocyada kala duwan ee furayaasha micro. Tani waxay kaa caawin doontaa inaad doorato cutubka saxda ah ee daboolaya baahiyahaaga mashruuca. Maqaalkani wuxuu ku siin doonaa aragti qoto dheer oo ku saabsan 6 t ...
Riix badhanka badhanka Micro, Kala beddel, Badhanka Riix Footswitch, Beddelka Korontada, Bog Beddel Boot, Micro Riix Button Micro Switch No Nc Wadajir,